Mandehandeha any Barcelona: inona no hatao any Barcelona amin'ny volana ririnina | Vaovao momba ny dia
Mandehandeha any Barcelona: inona no hatao any Barcelona amin'ny volana ririnina
Vaovao momba ny dia | | Barcelona
Barcelona misy lanezy
Ny ririnina no fotoana mety indrindra hanaovana a Dia nankany Barcelona, mora kokoa ny sidina sy hotely, tsy feno mpizahatany ny arabe ary somary malefaka ihany ny toetr'andro, mahalana ambanin'ny 10 degre. Ny Ciudad Condal, lavitra ny ho faty aorian'ny fahantrana amin'ny fahavaratra, dia manana fanahy manokana amin'ny volana ririnina, indrindra rehefa manakaiky ny Noely.
Raha mikasa fialan-tsasatra ianao dia aza adino boky mialoha ny toeram-ponenanao hahazoana ny vidiny tsara indrindra! Topazo maso ny tranokalan'ny Travelodge, nanokatra trano fandraisam-bahiny tao Poblenou ry zareo ary misy efitrano tena mora sy manerana ny afovoany.
Mba hamaranana ny drafitry ny dianao dia ireto misy torohevitra sy hetsika hatao any Barcelona mandritra ny ririnina:
1 Inona no hatao any Barcelona amin'ny volana Novambra
2 Inona no hatao any Barcelona amin'ny volana Desambra
3 Inona no hatao any Barcelona amin'ny volana Janoary
4 Inona no hatao any Barcelona amin'ny volana feb
Inona no hatao any Barcelona amin'ny volana Novambra
Amin'ny volana novambra dia manomboka ny fihenan'ny mari-pana ary miaraka aminy ny fanahy krismasy tonga any Barcelona. Manomboka amin'ny 30 Novambra ka hatramin'ny 23 Desambra dia azonao atao ny mitsidika ny Fira de Santa Llúcia, iray amin'ireo tsena Krismasy malaza eran'i Eropa rehetra izay atao eo akaikin'ny katedraly. Ny tantarany dia nanomboka tamin'ny 1786. Ao amin'ny Fira de Santa Llúcia no ahitanao ireo entana Krismasy: manomboka amin'ny sary namboarina ho an'ny nahaterahana ka hatrany amin'ny hazo krismasy, ao anatin'izany ny ampongatapaka na vatomamy krismasy.
Inona no hatao any Barcelona amin'ny volana Desambra
Iray amin'ireo fombafomba Krismasy miorim-paka lalina indrindra dia ny an'ny fihinanam-bilona velona. Betsaka, fa ny iray amin'ireo malaza indrindra sy afovoany dia ny Plaza de Sant Jaume izay azonao vangiana mandritra ny herinandro voalohan'ny Desambra.
Iray amin'ireo hetsika ara-panatanjahantena malaza indrindra eto an-tanàna ny Ny Krismasy Cruise ao amin'ny Port of Barcelona, izay ankalazaina amin'ny faha-25 ao amin'ny seranan-tsambon'i Barcelona ary efa manana zato taona mahery ny fomban-drazana.
Raha mikasa fialan-tsasatra ianao Faran'ny taona, Feno fety i Barcelona. Manoro hevitra anao izahay handeha any Plaça Catalunya amin'ny misasakalina hihinana ny voaloboka roa ambin'ny folo. Aorian'izay, afaka manohy ny alina ianao amin'ny iray amin'ireo fety maro izay atao ao an-tanàna. Faritra tena velona ny faritr'i Poblenou, misy fety amoron-dranomasina maro ary toeram-pandihizana. Iray amin'ireo toerana malaza sy malaza eto an-tanàna ny efitrano Razzmatazz (ao amin'ny manodidina an'i Poblenou afovoany).
Inona no hatao any Barcelona amin'ny volana Janoary
Taorian'ny fankalazana ny Taom-baovao, ny hetsika lehibe dia tsy isalasalana fa ny Three Kings Parade. Manomboka ny 5 janoary amin'ny 5 ora folakandro ny matso, rehefa tonga amoron-dranomasina ao amin'ny Moll de la Fusta ny Magy Telolahy, avy eo manomboka ny fitsidihana ny tanàna izay miafara amin'ny Plaza España tokony ho amin'ny 10 alina.
Amin'ny famaranana ny Krismasy fialantsasatra dia tonga ny varotra ririnina. Barcelona dia toerana mety handehanana miantsena.
Inona no hatao any Barcelona amin'ny volana feb
Ny volana Febroary no fotoana mety hanatrehana ny iray amin'ireo lalao ao amin'ny Camp Nou. Topazo maso ny tranokalan'ny Barça mba hahitana tapakila http://www.fcbarcelona.es/info-entradas
Manantena izahay fa hamporisihina handositra any Barcelona ianao amin'ity ririnina ity, araka ny fahitanao azy, tsy ho fohy drafitra ianao ary afaka mahazo vidiny tena lafo raha mamandrika ny fitaterana sy ny fampiantranoana mialoha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Barcelona » Mandehandeha any Barcelona: inona no hatao any Barcelona amin'ny volana ririnina
Toa tsy mampino fa efa akaiky dia akaiky ny Krismasy!
The Great Banyan, ny hazo lehibe indrindra any India